१३ वर्षमै पिता बनेका यी बालकको घतलाग्दो कहानी यस्तो छ « गोर्खाली खबर डटकम
५१ मिनेट अगाडी
५२ मिनेट अगाडी
५३ मिनेट अगाडी
५४ मिनेट अगाडी
५५ मिनेट अगाडी
५६ मिनेट अगाडी
१३ वर्षमै पिता बनेका यी बालकको घतलाग्दो कहानी यस्तो छ
२०७७ फाल्गुन १ गते शनिवार प्रकाशित
एजेन्सी– १३ वर्षको उमेरमा आमा बनेका केही घटना सार्वजनिक हुन्छन् । नेपालमै पनि यस्ता केही घटना यदाकता सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन् । तर, १३ वर्षको उमेरमै पिता बनेको घटना सायद विरलै होलान् ।
घटना बेलायतको हो । उनी २००९ मा १३ वर्षको उमेरमै पीता बनेको खबर सार्वजनिक भएको थियो । यो खबरले सबैलाई अचम्मित पारेको थियो । कतिपयले त यो खबर पत्याउनै सकेनन् । तर यो वास्तविक घटना थियो । ती किशोरको नाम एल्फी हो । उनको बारेमा समाचार द सन पत्रिकाले छापेको थियो पहिलोपटक । उनको कहानी गज्जबको छ ।
जब उनी १२ वर्षका थिए, एकजना १५ वर्षीया किशोरीसँग उनको प्रेम बस्यो । उनीहरुबीच सम्बन्ध भयो र ती प्रेमिका गर्भवती भइन् । यसरी ती किशोर १३ वर्षको छँदा उनकी प्रेमिकाले बच्चा जन्माइन् ।
आफ्नी प्रेमिकाले जन्माएकी आफ्नी छोरी काखमा राखेर बसिरहेको एल्फीको तस्वीर साँच्चीकै भाइरल बन्यो । तर एल्फी चाहिँ पिता बन्दा आफूलाई शानदार अनुभव भएको बताएका थिए ।
तर विडम्बना उनी बाबु बनेको एक वर्षमै उनकी प्रेमिकाले उनलाई धोका दिइन् र छोरी सँगै लिएर अर्कैसँग हिडिन् । ती भूपू प्रेमिकाले अरु कसैसँग बिहे गरिन् ।
१३ वर्षको उमेरमा बाबु बन्न लागेको थाहा पाउँदा अर्थात् प्रेमिका गर्भवती भएको थाहा पाएसँगै एल्फी निकै जिम्मेवार बनेका थिए । प्रेमिकाले बच्चा नजन्माउने कुरा गर्दा उनले इन्कार गरेका थिए र बच्चाको जिम्मेवारी आफूले लिने भन्दै प्रेमिकाको पूरा ख्याल गरेका थिए ।
तर, प्रेमिका छोरीलाई लिएर पोइल गएपछि एल्फी गहिरो पीडामा परे । त्यसपछि नराम्ररी बिग्रेका थिए । मादक पदार्थ लगायत सेवन गर्न थाले । उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । सोही कारण उनी जेल जीवन बिताउन बाध्य बनेका थिए ।
यो पनिपढ़नु होस:एकसाथ मिलाएर खान नहुने ५ फलफूल
हरेक फलफूलको सेवन स्वास्थ्यकालागि लाभदायक मानिन्छ । फलफूलमा हाम्रो शरीरमा चाहिने पौष्टिक तत्व प्रचुर मात्रामा पाइन्छ । तर कतिपय अवस्थामा भने फलफूलले हाम्रो शरीरलाई फाइदा गर्दैन ।
यदि सही फलफूलको मिश्रण हुन नसकेमा यसको सेवन विषाक्त बन्छ र यसले शरीरमा क्षती पुर्याउँछ । के के हुन् त्यस्ता फलफूल ?
१. दुध र सुन्तला
सुन्तला वा सुन्तलाको जुससँग दुध एवम् दुधजन्य परिकार मिलाएर खानु स्वास्थ्यकालागि हानिकार हुन्छ । यसले पाचनयन्त्रमा समस्या निम्त्याउँछ ।
२. अम्बा र केरा
अम्बाको सेवन स्वास्थ्यकालागी लाभदायक मानिन्छ । यसका साथै केराको सेवन पनि लाभदायक नै हुन्छ । तर, अम्बा र केराको मिलाएर खाइयो भने यसले टाउको दुख्ने, पेट दुख्नेलगायको समस्या हुनसक्छ ।
३. मेवा र कागती
कतिले स्वादका लागि मेवाको सेवन गर्दा कागतीको रस मिसाएर खाने गर्छन् । तर यसले शरीरमा हानी गर्छ । कागती र मेवाको रस मिसाएर सेवन गर्दा हेमोग्लोबिन सम्वन्धी समस्या समेत आउन सक्छ । विशेषगरी बच्चालाई मेवा र कागती मिलाएर ख्वाउनु हुदैन ।
४. दुध र भूँइकटहर
दुध र भूँइकटर आपसमा मिसाएर खानु हुदैन । एकै पटक यी फल खाएमा यसले पाचनतन्त्रमा समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
५. सुन्तला र गाजर
सुन्तला र गाजर अलग अलग खानु स्वास्थ्यकालागी लाभदायक हुन्छ । तर, यी दुईको मिश्रण भने हानिकारक हुन्छ । यसले शरीरमा गम्भीर हानी पुर्‍याउन सक्छ ।
आज आमाको मुख हेर्ने दिन, देशभर आमालाई मीठामीठा खानेकुरा खान दिई श्रद्धा भक्तिसाथ मनाइँदै
खोलामा डुबेको बाकसभित्र बेवारिसे अवस्थामा थियो यति धेरै पैसा, २२ वर्षसम्म कसैले देखेनन्…
आज देखि सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि प्रयोगात्मक परिक्षा सुरु
कोरोना संक्रमणबाट पूर्वराज्यमन्त्री बिष्टको निधन
उपत्यकामा निषेधाज्ञा पुंन १ साता थपिने
सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाको ५ काे दोस्रो कार्यकालका लागि निवर्तमान मेयर भरतकुमार थापा